Sarkaal lagu dilay hawlgal ka dhacay Degmada Beled Xaawo – STAR FM SOMALIA
Sarkaal lagu dilay hawlgal ka dhacay Degmada Beled Xaawo
Sarkaal ka tirsanaa Saraakiisha Degmada Beled Xaawo ee dhinaca ammaanka, ayaa wuxuu ku dhintay hawlgal gelinkii dambe ee Isniintii ka dhacay Degmadaasi.
Sarkaalkan, ayaa ku dhintay hawlgal lagu doonaayay in lagu soo qab qabto maleeshiyo beeleed oo hal habeen ka hor Saldhiga Booliska Degmada Beled Xaawo ka sii deysay nin, sida la sheegay dhalinyaro u qoraayay Ururka Daacish.
Maleeshiyadan oo iska caabin ugala hortimid Ciidamada Degmada Beled Xaawo, ayaa waxaa ku dhintay Sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Sanweyne.
Ciidamada Dowladda, ayaa waxaa u suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan mid ka mid ah maleeshiyadaasi, xilli uu ku dhaawacmay hawlgalkaasi.
Suxufiyiinta ka hawlgasha Degmada Beled Xaawo, ayaa soo sheegaaya in weli uu socdo hawlgalka lagu baadigoobaayo maleeshiyada deegaanka ah.
Ninka xabsiga laga sii daayay oo Macalin Dugsi Qur’aan ahaa, ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhalinyaro uu u qoray Ururka Daacish, isla-markaana uu ka amba bixiyay Degmadaasi.
Dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, ayaa waxay gubeen gaari dagaal oo ay la socdeen Ciidanka Militariga Kenya
Xiisad ka dhalatay laba qof oo Soomaali ah oo lagu dilay Degmada Mandheera